IZINYANGO ZEMFUNDO - Thumela RELAY
Ngabe iLebanon izophola kanjani?
Ukusungulwa kwezepolitiki okwaqoka uHenry Diab njengoNdunankulu waseLebanon kungasizakala kuphela ngokwehluleka kwakhe. UDeveli wayaziwa ngumphakathi nge ...
ENdiya: Okuthunyelwe kuFacebook okuhlose kumaSulumane kubangela imibhikisho ...
Okungenani abathathu bafile esikhungweni sezobuchwepheshe nodlame ngomyalezo odelelayo mayelana noMprofethi uMuhammad, kusho amaphoyisa. Cishe abantu abathathu bashonile edolobheni eliseningizimu neNdiya iBangaluru ngemuva ...
UMongameli uDonald Trump usabise ngokuvimbela iTikTok
Umlindi wobumfihlo bedatha waseFrance i-CNIL ivule uphenyo lokuqala ngohlelo lokusebenza lokwabelana ngamavidiyo aphethwe ngabaseChina iTikTok ngemuva kokuthola isikhalazo. ITikTok, ephethwe yiByteDance yaseChina, isivele iyaphenywa ngobumfihlo…
AbakwaMoody: Isikhungo sokulinganisa asisabeki usongo lokwehlisa izinga labo ...
I-ejensi yokulinganisa, ephakamise usongo lokwehliswa kwesilinganiso sabo sobukhosi, yashintsha umqondo wayo. Ngenxa yengcindezi yaphesheya? Ithemba lokubona isilinganiso sobukhosi bamazwe ase-Afrika liwohloka yilokho ...
EChad: U-Mohamed Christian Ndonga, 29, uphawu lokuqhamuka osemncane
Iqembu likahulumeni elibekwe ngaphansi kophawu lokuqabuleka kanye nokungena endaweni yentsha. "Ngiphupha osemusha obhubhayo futhi owenqenayo" kusho uMengameli waseChadian u-Idriss Deby ITNO, ngenkathi esungulwa ku ...
Isimo esiphuthumayo semvelo e-Indian Ocean ngemuva kokuchitheka kawoyela
Isizwe esiqhingini oLwandlekazi i-Indian simemezela isimo esiphuthumayo sendawo njengoba izithombe zesiphuphutheki zibonisa ubuqili obumnyama busakazekela emanzini. Izakhamizi ezikhathazekile zaseMauritius, izwe elisesiqhingini oLwandlekazi i-Indian, ...
Izeluleko ezi-4 zokungalahli izinga ngesikhathi samaholide
Ekugcineni kuyiholide lehlobo! Ithuba lokuphumula ekugcineni ngemuva kokuhlupheka kwezinyanga ezisanda kwedlula kodwa akumelwe sikhohlwe izifundo. Nawa amathiphu ama-5 wokuhlala usezingeni! Isimo sezulu esihle ekugcineni sixazululekile! Yebo,…